Wepamusoro 20 Kushambadzira Automation Solutions | Martech Zone
Chishanu, December 9, 2011 China, May 25, 2017 Douglas Karr
Marketing automation iri kuve hurukuro yatiri kuita nevatengi zvakanyanya uye svondo rega rega. Nhasi takurukura Hubspot (inoshandiswa nemutengi), Chiito-On (iyo yatakashandisira vaviri vevatengi vedu) uye Simbisa nemutengi uye ini ndanga ndichingotaura kuchikwata svondo rapfuura nezve budiriro yavo.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti hapana chaicho kushambadzira otomatiki mhinduro iri nani kupfuura imwe. Zvimwe zvacho zvine zvimwe zvinoshamisa, asi iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kuti maitiro ako emukati uye mamwe mashandiro anogona kushanda neayo yekushambadzira otomatiki chikuva pane kuyedza kuita imwe uye kuyedza kushandura yako yese kambani kuti ikwane iyo.
Mune rurefu runyorwa rwe software sarudzo dzinogona kubatsira bhizinesi rako, Kushambadzira Kwekushambadzira kuri padyo nepamusoro. Yakave chimwe chezvinyanya kudiwa maturusi evashandi vekutengesa. Kushambadzira Kushambadzira kunobatsira makambani kushandura zvinotungamira kuva vatengi uye kukura kutengesa kubva kune varipo vatengi.
Capterra chishandiso chikuru chekutsvaga mhinduro dzemapurogiramu. Tarisa uone yavo Yekushambadzira Yekushandisa Yekushandisa Directory yeiyo yakazara rondedzero yeVashambadziro veMagetsi vanopa.
Tags: Chiito-Onactoncapterrahubspotsarudzakurudyi pane kudyidzanaRoyi
Ini ndashandisa Marketo uye ndinonyatsofunga kuti vane chigadzirwa chakasimba. Ini ndinofunga kushambadzira otomatiki kunomanikidza masangano kuti afunge zvakadzama nezve chiitiko chavari kupa tarisiro yavo uye kwavanotungamira, uye mazhinji mabhenefiti ari mukugona kuyera zvese uye kuyedza zvisina basa.
Debbie Qaqish pamwe nePedowitz Group inotaura nezve "Revenue Marketing" isingamire, uye zviri pachena masisitimu aya anopa vashambadziri izwi rakasimba semutungamiriri wezvekutengesa 'nekuti rakazara data.
Tichave tichitaura munguva pfupi. Ndingafarire kuziva zvakawanda zvepfungwa dzako zvichitorera Act-On.
Isu takave neruzivo rwakakura ne @actonsoftware: twitter nevashandi vavo… vanhu vakanaka chaizvo pamusoro ipapo vaibatsira kwazvo. Ini ndinofunga chidimbu chakasimba pane chishandiso chavo ndechekuti iwe unogona kunyoresa kunyoresa kweGotoWebinar uye ndokusundidzira uchingoerekana waenda kuCRM yako… yakanaka chaizvo kumakambani esoftware ari kusundira mademo uye mawebhundari mazuva ese.
Zvita 9, 2011 na2: 32 PM
Iyi ndiyo nzira inotsausa. Inosanganisa maapuro nemaorenji uye "inonyanya kufarirwa" haireve chinhu!
Zvita 9, 2011 na2: 36 PM
Ini handidi kupokana, Scott. Ini ndanga ndichitsvaga yakanaka runyorwa rweMarket Automation mapuratifomu kwechinguva, zvakadaro, uye ndakafunga kuti iyi runyorwa yakanga isina kunyanyoipa. Sezvo ini ndataura pamusoro, mumwe anofanirwa kunyatso kuenzanisa maitiro avo emakambani nemhinduro chaiyo, hazvo!
Zvita 9, 2011 na5: 08 PM
Hapana kunetseka, ini ndinowana izvo zvauri kuyedza kuita. Chero bedzi mapako aripo, zvakanaka. Iva nevhiki yakanaka!